မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရမည့်အချက်များ (၁) စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
လူးကပ်စ garcia | | ရိတ်လိုက်ပြီ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မိမိကျွမ်းကျင်သည်ဟုထင်သောအလွန်မသိသောကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ငါတို့စုဆောင်းမယ် နည်းနည်းအကြံပေးချက်များ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ရိတ် နှင့်မုန်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ ဖြတ်တောက်ဝက်ခြံ cystic ဆံပင်, ယားယံခြင်း, etc
¿ဘယ်အချိန်မှာရိတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သနည်း? ငါရိတ်ရန်အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်အကြောင်းကိုကျနော်တို့ပို့စ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့ငါနံနက်ယံ၌နှင့်ရေကောင်းတစ် ဦး ပြီးနောက်ရိတ်ချင်, အပေါက်ဖွင့်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် "စစ်ပွဲ" အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြ၏ညဉ့်အခါသင်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်အာမခံပါလိမ့်မယ်။
မရိတ်မီကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ အရေပြားကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ မျက်နှာသန့်စင်စက် နွေးထွေးသောရေနှင့်အရေပြားကိုရေဓာတ်များစွာခန်းခြောက်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုစိတ်တိုစေသည်။ အရေပြားကိုပွတ်သပ်။ နူးညံ့စွာမကုသဘဲနှေးကွေးစွာခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ၊
ထို့အပြင်အရာမရှိ။ အသားအရေအလွန်သန့်ရှင်းပြီးတာနဲ့အပေါက်များကိုကောင်းစွာဖွင့်ရန်လိုအပ်သည် ဖြစ်နိုင်သောယားယံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ပါးခြင်းနှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအခြားစိတ်အနှောင့်အယှက်များ။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မုတ်ဆိတ်ရိတ်သိမ်းခြင်းမပြုမီမုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကိုကြိုတင်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြင့်အသုံးပြုရမည်။ ကျနော်တို့တစ်ခုအကြံပြုပါသည် အန်သိုနီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး (နှင့်အတူ Glycolic အက်ဆစ်, ယားယံခြင်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနှင့်မုတ်ဆိတ်၏ကြီးထွားမှုကိုလျှော့ချ) သို့မဟုတ်၏ အမေရိကန်လေယာဉ်အမှုထမ်း (သင်တုန်းဖြင့်ရိတ်ခြင်းအတွက်အထူး) ကျွန်တော်ယခင်ကမှတ်ချက်ပေးကြောင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ရိတ်လိုက်ပြီ » မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရခြင်းအတွက်အကြံပြုချက်များ (၁)
အားလုံးဟိုင်း! သင်၏မှတ်စုများသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပုံရသည်၊ အမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာထဲသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလုံးလုံးလျားလျားရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်အတွက်မင်းကိုမချီးမြှင့်ခင်ငါမှာသံသယတွေရှိတယ်၊ ငါဟာအသက် ၂၀ ရှိပြီ၊ မုတ်ဆိတ်မွေးကြီးထွားလာတယ်။ ဒါပေမယ့်မုတ်ဆိတ်တောက်ပစေဖို့ထုတ်ကုန်တစ်ခု၊ အထူ။ အခိုက်အတန့်အတွက်ထပ်မံပြောကြားခြင်းမရှိဘဲသင့်တုန့်ပြန်မှုကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ ကောင်းကင်တမန်
ကောင်းပြီ, ငါသိသလောက်မုတ်ဆိတ်၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးကူညီပေမယ့်အရှိန်မြှင့်ကူညီထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ Accelerator, ရှိပါတယ်။
ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်တော်မုတ်ဆိတ်ကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၁၄ နှစ်အရွယ်ကတည်းကကြီးထွားမှုရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အရမ်းထူလာတယ်၊ ခဲယဉ်းလာပြီးကိုင်တွယ်ရိတ်သိမ်းရတယ်။ ကြိုတင်မဲပေးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ site ကို။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။